ဘယ်သူက ရှက်စရာလဲ – Stop Body Shaming | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘယ်သူက ရှက်စရာလဲ – Stop Body Shaming
ဘယ်သူက ရှက်စရာလဲ – Stop Body Shaming
Posted by ဇီဇီ on Feb 20, 2017 in Creative Writing, Cultures, Relationships & Family, Society & Lifestyle, Think Tank | 36 comments
စာ က ရေးချင်ပေမဲ့ ချရေးရလောက်အောင် စိတ်ထဲမဝင်လာလို့ မရေးဖြစ်။
ခုတော့ ခုတလော စိတ်ထဲ ခိုးလို့ခုလုဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာ ကို ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးတယ်။
ကိုယ့် စိတ်အခြေခံလေးကို အရင်ပြောပါရစေအူး။
ငယ်တုန်းကတည်းက သူများရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင် ပိန်တာ ဝတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခန္ဒာကိုယ်ချို့ယွင်းမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကဲ့ရဲ့တာ ပြောင်လှောင်တာ မျိုး ဘယ်တုန်းကမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးသလို လုပ်နိုင်တဲ့ သူတွေရဲ့ စိတ်ကို နားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူးး
အသက်ကြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှ ဆိုက်ကိုဇစ် အရ အငုံ့စိတ်တို့ .. အာရုံစိုက်ခံချင်လို့ သူများမကြိုက်တာ တမင်ပြောလေ့ရှိတဲ့ စိတ်တွေကို နားလည်လာလို့သာ တော်တန်ရုံဆို ခွင့်လွှတ်တယ်။ နားလည်ဖို့ကြိုးစားတယ်။
စတာနောက်တာ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို လှောင်ပြောင်ဖို့ ဝန်မလေးသလို သူများလာ နှိပ်ကွပ်တာ လှောင်ပြောင် တာလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် နေလေ့ရှိတယ်။
အထူးသဖြင့် ကိုယ် ခင်မင်တဲ့ ချစ်ခင်တဲ့ သူတွေ ကိုယ့်အပေါ် ဘယ်လို ပြောပြော ကျနော် စိတ်ဆိုးခဲတယ်ရယ်။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဟာသပြောတတ်တာ သူများဝင်ဆွမ်းကြီးလောင်းဖို့ မဟုတ်ပါဘူး!
ကိုယ့်သွင်ပြင်နဲ့ကို၊ ကိုယ့်ရပ်တည်မှုနဲ့ကိုယ်တွေမှာ သူများက မှိုချိုးမျှစ်ချိုးလာပြောတာခံနေရအောင် အကြောင်း ဘာတစ်ကြောင်းမှမရှိဘူးလေ။
ကိုယ်တိုင်က သူများပြစ်ချက် မမြင်ရအောင် တုံး အ နေလို့တော့မဟုတ်။
သူများသွင်ပြင်ကို လှောင်ပြောင်လေ့ရှိတဲ့ သူ တို့ ပြစ်ချက်တွေ ကို ကြားးတာနဲ့တင် လဲသေသွားအောင် ပြောချင်သော်လည်းးး သူများးရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးး ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ မပြောရဘူးးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးးမထားရတော့ မျိုသိပ်လက်စနဲ့ ပဲနေခဲ့တယ်။
စိတ်ထဲ ကတော့ ပဲ့ကျနေအောင် တောက်ထင်သေးတယ်။
ကိုယ်တိုင်က ဘယ်သူက ကိုယ့်ကို သွေးတိုးစမ်းသလား၊ စနောက်သလား၊ လှောင်ပြောင်သလား၊ ကဲ့ရဲ့ချင်တာလား၊ နှိပ်ကွပ်ချင်တာလား ကွဲကွဲပြားပြားသိပေမဲ့ လူဆိုတာက ၁ဝ ခါပြော အတည်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးမို့ ၂ ခါ လောက် စနောက်တာကို ငြိမ်နေလိုက်ရင် အပြောခံ သတ္တဝါဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်လို့ သူများကိုရော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော သတိပေးနေရတယ်။
အပေါင်းအသင်းပိုင်းမှာ ချစ်ခင်လို့ စတာရှိတယ်။
မိန်းမ တစ်ယောက်ကို သွေးတိုးစမ်းချင်လို့ နောက်တာမျိုးရှိတတ်တယ်။
ဒီကောင်မကို အမြင်ကပ်လို့ပါကွာဆိုပြီး နောက်ချင်ယောင်ဆောင် ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ ပြောတာမျိုးရှိတယ်။
ဘယ်သူ ဘယ်စကားထွက်ရင် ဘာ အဓိပ္ပာယ်လို့ သိနိုင်အောင်ကို အတွေ့အကြုံ များပြီဖြစ်လို့ သည်းခံနိုင်သလောက် သည်းခံတယ်။
ပျော်ပျော်နေတာ၊ ဟာသပြောတာ၊ အရောဝင်တာ၊ ရင့်ရင့်သီးသီး ပြန်မပြောတာဟာ ကိုယ့်ကို ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ ပြောခွင့်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိစေချင်တယ်။
ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ဟာ မိန်းမ တစ်ယောက်ထက် မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူစွဲကို ဆုတ်ကိုင်ထားတဲ့ နိုင်ငံမှာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ထဲ လမ်းမထွက်ဝံ့တဲ့ အဖြစ်တွေ အွန်လိုင်းမှာ ဘာ Relationship မှ ချိတ်မထားပဲ သုံးမရတဲ့ အဖြစ်တွေ ရှိနေတာတော့ အံဩစရာ။
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ထဲကို လမ်းမှာ မြင်မြင် အွန်လိုင်းမှာမြင်မြင် မလေးစားပဲ သွေးတိုးစမ်းချင်စိတ်က အရင်လာတဲ့ အမျိုးသားတွေ အများစုရှိတဲ့ နိုင်ငံမှာ ဘယ်စိတ်ဓာတ်က ပိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ သွသူတို့ ထင်နေလဲတော့မသိ။
အွန်လိုင်းမှာ ကွကိုယ် လုံလုံခြုံခြုံ ပုံတင်တာသည် ပိုးစိုးပက်စက် အပြောခံဖို့ မဟုတ်။
ခုပြောချင်တာ Body Shaming အကြောင်းလေး စပ်မိစပ်ရာ ပြောချင်တာပါ။
စိတ်သာရှင်စော ဘုရားဟော ဘာညာ ပြောနေတဲ့နိုင်ငံမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို အဓိက စောင်းပေးမြင်ပြီး လူ တစ်ယောက်ကို Judge လုပ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးကတော့ စိတ်ပျက်စရာပဲ။
ကျနော်တို့မှာ အဲဒီလို ဆုံးဖြတ်ခွင့် ၊ Judge လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူးး။
ရုပ်ရှင်ထဲက အစ ရုပ်ဆိုးရင် လူဆိုး၊ ရုပ်ချောရင် လူကောင်းသတ်မှတ်ချက်တွေ။
အသားမဲသူဟာ ဝသူဟာ မျက်စိစွေသူဟာ စကားမပီသူဟာ သွားခေါသူဟာ မိန်းမလျာတွေဟာ အလှောင်ပြောင်ခံတွေ စသည်ဖြင့် ကျင့်သားရခဲ့တော့လည်း ဘာမှ မပြောလိုတော့။
အတူတူ အနူနူချင်းကို မဟားးနဲ့ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပေါ့လေ…!!! ချို့ယွင်းချက်ဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိတယ်။ အားသာချက်ဆိုတာလည်း လူတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ရှိနေတယ်။
သူများကို အပျော်ဖြစ်စေ အတည်ဖြစ်စေ လှောင်ပြောင်ကဲ့ရဲ့ဖို့များ တွေးမိခဲ့ရင် ကျနော် အဲဒီ စကားကိုပဲ အမှတ်ရလိုက်ပါတယ်။
ကျနော် ပြောချင်တာထက်ပိုပြည့်စုံတဲ့ ဆောင်းပါး ၂ ပုဒ် ကိုပဲ Share ပါ့မယ်။
ပထမ တစ်ပုဒ်က (credit – သကောင့်သား( အခရာ ))
လူ လူချင်းပဲဗျာ (Stop Body Shaming)
“ဝက်မ ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ နင် လိုက်လဲလိုက်ပါပေတယ်…အားအားရှိ စားနေတာကိုး”
“ယောကျင်္ားဖြစ်ပြီး ဆေးလိပ်မသောက်၊အရက်မသောက် နဲ့ စောက်ခြောက်”
“မီးယပ်ပိန် မီးယပ်ခြောက်မ…ဘယ်လောက်စားစား ဝလာတာလဲမဟုတ်ပဲနဲ့ စားမနေနဲ့”
“တော်စမ်းပါ သခေါရာ..သွားသွား ပြောင်ကြီးနားမှာ သွားထိုင်ချည်”
“စွေစောင်းမရယ်…ငါ့ကို တည့်တည့် ကြည့်ပြီးမှပြောဟာ..မျက်စိ တစ်လုံးက ဆိတ်ကျောင်း ပြီး နောက်တစ်လုံးက စွန်လွှတ်မနေနဲ့”
ဘယ်စာကြောင်းက ဖတ်ရတာ အဆင်ပြေနေတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဘယ်စာကြောင်းမှ ဖတ်လို့မကောင်းသလို မြင်ရ ကြားရတာ လည်းအဆင်မပြေလှပါဘူး။
ဒါတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ တကယ့်အပြင်လောကမှာလက်တွေ့ပြောဖြစ်နေတဲ့ စကားတွေဖြစ်နေတာ အံ့ဩစရာပါပဲ။
မိသားစုဝင်တွေ ၊ သူငယ်ချင်းတွေ ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ အစအနောက် သဘောမျိုး နဲ့ ဖြစ်စေ၊ တမင်တကာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နဲ့ဖြစ်စေ ခေါ်ဖြစ်နေတဲ့ နာမည်တွေနဲ့ ပြောဖြစ်နေတဲ့ စကားတွေပါ။ သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ဝမ်းနည်းစရာပါ။ တကယ်ဆို လောကကြီးမှာ လူ ၂ မျိုးပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လူဆိုး နဲ့ လူကောင်းပါပဲ။
ရုပ်ဆိုး၏ ၊ မဆိုး၏ ကို ဘယ်စံနှုန်း၊ဘယ်ပေတံတွေနဲ့တိုင်းတာပြီး ဆုံးဖြတ်လို့ရပါသလဲ။
ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုဦးတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ အဲဒီလို ဆုံးဖြတ်ခွင့် ၊ Judge လုပ်ခွင့်ရှိပါသလား။
ရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာ အရပ်ပုပြီး ကွနေတာပါလား?..
ဝတာ ပိန်တာကို ခေါ်တာပါလား?
မွေးရာပါ ကိုယ်လက် အင်္ဂါ ချို့တဲ့ တာပါလား?..
အဲဒီ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေ က အားနည်းချက်တွေလို့ ထင်နေပါသလား?
တကယ် ရုပ်ဆိုးတာကတော့ လူသားအချင်းချင်းကို အဲဒီလို စနောက် နှိမ်ပြုပြောဆိုလိုက်ရတာကို သာယာနေတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါပဲ။
အတတ်နိုင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နာမည်တွေပဲခေါ်ကြရင် ပိုမကောင်းပေဘူးလားဗျာ။
ဘယ်သူကမှတော့ ဂျပုတို့၊မီးယပ်ခြောက်မတို့၊ကုလားမဲ တို့ အခေါ်ခံချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်တော့ ပုတာ၊ဝတာ၊ပိန်တာ၊မဲတာ ဟာ အားနည်းချက်မဟုတ်သလို နှိမ်စရာလဲမဟုတ်ပါဘူး။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာတင် မကပဲ နိုင်ငံတကာမှာပါ ( Body shaming ) ဒီလို လူသားချင်း နှိမ်ချပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေ ရှိပေမယ့် ကျွန်တော့်တစ်ဦးထဲအမြင်အရ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက အတော်ဆိုးဆိုးထဲမှာပါတယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။
အနီးဆုံး ဥပမာပေးရရင် ကျွန်တော်တို့ လူမှန်းသိတတ်စ အရွယ်ထဲက ဒီနေ့ထက်ထိ ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်တွေ ရဲ့ ၉၅ % မှာ လူလူချင်း နှိမ်တာ၊ ဟာသ တစ်ခုလိုဆက်ဆံတာတွေကိုသာကြည့်ပါ။
နဖူးပြောင်တာဟာ ရယ်စရာပါ ၊
နှခေါင်းကြီးတာဟာ ရယ်စရာပါ ၊
ပုလင်းဖင် မျက်မှန်နဲ့လူတွေဟာ ရယ်စရာပါ ၊
မိန်းမလျာတွေဟာ ရယ်စရာပါ ၊
အသားမဲတာ ရယ်စရာပါ ဆိုတဲ့ ပြကွက်တွေ ဒင်းကြမ်းပြည့်နှက်နေ တော့တာပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့တွေ ရယ်စရာမဟုတ်တာကို ရယ်မိနေတယ် ဆိုတာတော့ အသေအချာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခေါင်းတွေထဲမှာ ဒါတွေဟာ ရယ်စရာပါ လို့ တွေးထင်နေတာကို ရိုက်ထုတ်သင့်ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ မျိုးဆက်မှာမှ အတွေးအခေါ်တွေ မပြောင်းသေးဘူး ဆိုရင် နောင်မျိုးဆက်လည်း ကျွန်တော်တို့လို ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ပထမဆုံး ပြုပြင်သင့်တာက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပေါက်ကရ နာမည်တွေ ဆက်မခေါ်ပဲ နာမည်ရင်းတွေပြန်ခေါ်ပြီး လေးစားချစ်ခင်မှုကို တည်ဆောက်ဖို့ပါပဲ။
ကိုယ်ကတော့ လျှာဖျားလေးနဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်လို့ခင်လို့၊ ဒါမှမဟုတ် လှောင်ပြောင်ချင်လို့ အလွယ်တကူ ခေါ်လိုက်တာ ဖြစ်ပေမယ့် အခေါ်ခံရတဲ့သူတွေက အဲဒီလို အခေါ်ခံရတာကို ကြည်နူးနေမယ် ၊ သာယာနေမယ် ထင်ပါသလားခဗျာ။ လူတိုင်းမှာ ခံစားချက်ကိုယ်စီရှိတယ်ဆိုတာ မေ့မထားသင့်ပါဘူး။
အများနဲ့ လူနည်းစုဖြစ်နေလို့သာ သူတို့ ပြုံးပြီး ဘာမှမတုံ့ပြန်ကြတာပါ။ တချို့သောသူတွေကတော့ ဒါတွေဟာ အားနည်းချက်မဟုတ်မှန်းသိလို့ ဘယ်လိုခေါ်ခေါ် ဘယ်လိုမှမနေပဲ နေနိုင်ကြပေမယ့် အချို့သော စိတ်အားငယ်တတ်သူတွေအတွက်ကတော့ ဒီလိုခေါ်ဝေါ်ဆက်ဆံမှုဟာ issue တစ်ခုပါ။ ကိစ္စရှိတယ် ဆိုပါတော့။ စိတ်အားငယ်တတ်သူတွေအတွက် ဒီလိုပြုမူဆက်ဆံခံရတာ များလာတဲ့အခါ လူတောမတိုးချင်တော့တာတွေ ၊ လူတွေနဲ့ ဝေးလာတာတွေ ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေ ကျဆင်းလာတာတွေ၊ စိတ်ကျရောဂါဝင်လာတာတွေအထိ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
လူ့ဘဝကြီးဟာ နေချင်စရာမကောင်းပါလားဆိုတဲ့ မိုက်ရူးရဲ အတွေးအခေါ်မျိုးတွေ ဝင်လာပြီး တစ်ချို့တွေဆို တကယ်ကို မနေတော့ပဲ ရရာနည်းနဲ့ ထွက်သွားကြတဲ့အထိပါပဲ။ ဒါတွေအားလုံးရဲ့ ကနဦး တရားခံတွေဟာ ဘယ်သူတွေလို့ ထင်ပါသလဲ? သူတို့နေရာမှာ ငါသာဆိုရင်ရော ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး တွေးကြည့်ဖူးပါသလား။
သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ခင်များတို့၊ကျွန်တော်တို့တွေ အဲဒီ ဝတုတ်တွေ ဆီက ပိုက်ဆံမချေးဖူးဘူးလား။ ပုလင်းဖင်တွေဆီက စာမကူးဖူးဘူးလား။ မိန်းမခိုးပြေးတော့ အသားမဲ ရဲ့အကူအညီ တောင်းခဲ့ရတာလေးရော? အဖော်မရှိရင် နောက်ဆုံး ဂျပုတွေ၊လောရှေတွေ ကပဲ ခင်ဗျားနဲ့ လိုက်ပေးတာတွေ… သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အကုန်လုံးက လူတွေချည်းပါပဲ။ ပုံပန်းသွင်ပြင် ဆိုတာ တူကြမှာမဟုတ်သလို ရွေးချယ်လို့ ရခဲ့တဲ့ အရာမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပုံပန်းသွင်ပြင် ဆိုတာ အားနည်းချက် မဟုတ်သလို လှောင်ပြောင် ကဲ့ရဲ့ စရာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ လောက မှာ လူကောင်း နဲ့ လူဆိုး နှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။
လူမျိုးမှာလည်း အပြစ်မရှိသလို ၊ ဘာသာမှာလည်း အပြစ်မရှိပါဘူး။ ကောင်းတဲ့လူက ကောင်းပြီး ၊ ဆိုးတဲ့လူက ဆိုးမှာပါပဲ။
ကျွန်တော် မျှော်လင့်မိတာကတော့ ဒီဆောင်းပါးလေးဖတ်ပြီး ကိုယ်ပြုမူဆက်ဆံမိတာလေးတွေကို ပြန်တွေးကြည့်ကြဖို့ပါ။
အရင်တုန်းက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဝလွန်းအားကြီးလို့ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုစာလောက် အနှိမ်ခံခဲ့ရသလို သူများကိုလည်း နှိမ်ခဲ့ဖူးတာကို ဝန်ခံပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး Body shaming မလုပ်မိအောင် နေဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ ကိုယ်ချင်းလဲ စာမိသလို ပိုမိုချစ်ဖို့ကောင်းပြီး လေးစားမှုအပြည့်နဲ့ လူ့ဘောင်အသိုင်းအဝိုင်းလေး ဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်မိလို့ပါ။
လူ လူချင်းပဲဗျာ…. လောက မှာ လူကောင်း နဲ့ လူဆိုး နှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ တကယ် ရုပ်ဆိုးတာကတော့ လူသားအချင်းချင်းကို အဲဒီလို စနောက် နှိမ်ပြုပြောဆိုလိုက်ရတာကို သာယာနေတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါပဲ။
ကျနော့ ဆောင်းပါးလေးဖတ်ပြီး ကျနော့လိုပဲ တွေးမိတယ်ဆိုရင် Share ပေး၊ ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်။ ဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါလို့ပြောကြားရင်း ကျနော်တို့ တွေ သူများတွေကို body shaming လုပ်တာလေးတွေ လျှော့ပြီး လေးစားချစ်ခင်စွာ နေလိုက်ကြရအောင်လား။
နောက်တစ်ပုဒ်က (credit – phyodaybyday) ပါ။
Body Shaming လုပ်တဲ့အကျင့်ဆိုးလေးကို ဖျောက်ကြရအောင် ။
ကျွန်မတို့မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆုံရင် “ဟယ်ဝလာလိုက်တာ” “ဟယ်တော်တော်ပိန်သွားလိုက်တာ” စတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောတဲ့အကျင့်လေးရှိပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူးပြောလိုက်မိပေမယ့် တစ်ဖက်လူမှာခံရခက်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
အဲ့လိုနှုတ်ဆက်တာက အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ မိသားစုဝင်ဆွေမျိုးတွေကြားမှာ သိပ်ပြဿနာမရှိပေမယ့် သိပ်မခင်တဲ့လူအချင်းချင်းလုပ်ရင် အရမ်းရိုင်းတဲ့အပြုအမူလို့ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာမှတ်ယူပါတယ် ။ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲသာမဟုတ် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က အမျိုးသမီးတော်တော်များများလည်း မနှစ်သက်တာကိုသိရတော့ အားလုံးကိုသတိပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးဖြစ်လာပါတယ် ။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဝတဲ့သူတွေဆိုရင် ငယ်ငယ်ကနေကြီးလာတဲ့အထိ ဝခြင်းကိုပျက်ရယ်ပြုစရာလိုအမြဲလုပ်ခံရပါတယ် ။ ကျွန်မလည်းခပ်ငယ်ငယ်က ခပ်ပြည့်ပြည့်ခပ်ဝဝမို့ အစခံရရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒုက္ခကိုနားလည်ပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် အပျိုပေါက်လေးတွေနဲ့ လှချင်ပချင်တဲ့အရွယ်လေးတွေက အဲ့ဒီ့အတွက်အရှက်ရပြီးပိုခံစားရပါတယ် ။ ကိုယ်တိုင်ကအစားစားရတာနှစ်သက်လို့ဝတာမျိုးလည်းရှိသလို တစ်ချို့ကတော့မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ဝတတ်ကြပါတယ် ။ လူဆိုတာကိုယ့်ကိုကိုယ် perfect ဖြစ်နေချင်တဲ့သူတွေချည်းပါပဲ ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကို သဘာဝကပေးထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကို ကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံရမှာပါ ။ ဝိတ်ချတယ်ဆိုတာကလည်း အပြောလွယ်သလောက်အလုပ်ခက်တဲ့ကိစ္စမို့ လူအားလုံးလုပ်နိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး ။
ပိန်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေကိုလည်း ပိန်လို့ဆိုပြီးလွတ်မယ်မထင်ပါနဲ့ ဝတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကဖြစ်စေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကဖြစ်စေ ပိန်ခြင်းကိုလှောင်ပြောင်ကြပါတယ် ။ ပိန်တဲ့မိန်းကလေးတွေကြတော့ အဲ့လိုလှောင်ပြောင်ခံရတာများတဲ့အခါ အကျႌအဝတ်အစားဝတ်ရင် ကြည့်မကောင်းဘူး ဘာနဲ့မှမလိုက်ဘူးထင်လာကြပြီး စိတ်ဓာတ်ကျတတ်ကြပါတယ် ။
ပိန်တဲ့သူတွေက အစားစားတဲ့နေရာမှာလည်း ပြည့်တဲ့သူတွေလောက်မစားနိုင်ကြတာမို့ သူတို့ကို “စားပါဦးဟယ် နင့်ကြည့်ရတာ ပိန်ညှောင်နေတာပဲ” အဲလိုသွားပြောတဲ့အခါ ဝတဲ့သူတွေကို နှိမ်သလိုပြောတဲ့ “တော်တော်စားနိုင်တာပဲ အဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုပုံဖြစ်နေတာ” လိုပဲ သူတို့ခံစားရပါတယ် ။ သူတို့လည်းသူတို့အတိုင်းအတာနဲ့သူတို့ စားနိုင်သလောက်ပဲစားကြမှာပါ ။
ပြောရရင်တော့ ပိန်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဝနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့အတိုင်းအတာနဲ့သူတို့စားသောက်နေထိုင်နေပြီး ကျန်းမာနေဖို့ကအဓိကပါ ။ မကျန်းမာပဲသူများမျက်လုံးထဲကြည့်ကောင်းနေဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖိအားပေးဖို့မလိုပါဘူး ။
ကျွန်မတို့သဘောကျကြတဲ့ ဟောလိဝုဒ်ကမင်းသမီးတွေတောင်မှ မဂ္ဂဇင်းအဖုံးတွေပေါ်ကလို အပြင်မှာစင်းလုံးချောဖြစ်မနေပါဘူး ။ Photoshop တွေနဲ့ပြင်ထားတဲ့ before and after ပုံတွေကို ကျွန်မတို့ကြည့်ကြပြီး ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားကြတယ်မဟုတ်လား ။ ဒီကမ႓ာကြီးပေါ်မှာ ဘယ်သူမှရာနှုန်းပြည့် perfect ဖြစ်နေတဲ့ဘဝမျိုးကို မပိုင်ဆိုင်ကြတာမို့ အရေးကြီးဆုံးက ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိပြီး နေပျော်နေဖို့ပါပဲ ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ မီးဖွားပြီးခါစ အမျိုးသမီးတွေကိုလည်း သူတို့ခန္ဓာကိုယ်အပြောင်းအလည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကူညီဖေးမဖို့လိုအပ်ပါတယ် ။ ဘယ်သူမှတော့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံပျက်သွားတာ မကြိုက်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့်သဘာဝတရားကပေးတဲ့ တာဝန်ကို ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေမလွှဲမရှောင်သာ ထမ်းဆောင်ရပါတယ် ။ မီးဖွားပြီးပုံမှန် ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပိုင်ဆိုင်ဖို့ အချိန်တွေအများကြီးပြန်ယူတတ်ရတာမို့ သူတို့ကိုကိုယ်ချင်းစာနားလည်ပြီး ကိုယ့်နှုတ်ကိုကိုယ်စောင့်ဆည်းဖို့လိုပါတယ်ရှင် ။
ကလေးလေးတွေမြင်ရင်လည်း ဟယ်ကလေးကတော့ပိန်လိုက်တာ ဝလိုက်တာ စတာတွေမပြောပဲ တစ်ခြားစကားစမည်ပြောခြင်းနဲ့ သူတစ်ပါးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်မိတာကနေ ရှောင်ရှားပါ ။ ကလေးတွေပိန်သည်ဖြစ်စေ ဝသည်ဖြစ်စေ ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ကလေးလေးတွေအဖြစ်မြင်နေရတာက ပိုစိတ်ချမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားရှင် ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ကလေးအမေမို့ ကလေးကိုပိန်တယ် ဝတယ်ဝေဖန်ရင် မကြိုက်ပါဘူး ။ အဲ့လိုုကိုယ့်ရဲ့မစောင့်ဆည်းတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ကလေးအမေစိတ်ဖိစီးမှုရပြီး ကလေးကိုအစားကျွေးတဲ့အခါ အတင်းဖိကျွေးတာမျိုးလုပ်တတ်မိလို့ ကလေးနဲ့အမေနဲ့ကြားထဲဆက်ဆံရေး အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီး ကလေးလည်းစိတ်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ် ။
ကျွန်မအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် ဝလို့လှလို့ဆိုတဲ့စကားကို လက်မခံသလို ပိန်မှလှမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုလည်း မထောက်ခံပါဘူး ။ ကျွန်မကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ extreme မဖြစ်ပဲ ထိန်းသိမ်းပါတယ် ။ ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်ကို ကျွန်မယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတွက် စိတ်ချမ်းသာပါတယ် ။ ကျွန်မအတွက် Perfect ဖြစ်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမလိုပါဘူး ။ အဲဒါကျွန်မခံယူချက်ပါ ။
လူသားအားလုံးသာတူညီမျှစွာ သူ့အလှနဲ့သူရှိပါတယ် ။ အပြင်ပိုင်းအလှကို ဂရုစိုက်ဖို့လိုသလို အတွင်းစိတ်ကလေးလည်းလှမှ အလှတရားကပြီးပြည့်စုံတာပါ ။ ကိုယ်ကသူများထက် ပိုလှနေစေဦးတော့ အရေပြားတစ်ထောက်စာအလှဟာ ရေရှည်မတည်မြဲပါဘူး ။ ကိုယ်မလှနိုင်တော့တဲ့တစ်နေ့ လူတွေကိုယ့်အလှကိုမေ့သွားမှာပါ ။ စိတ်ထားလှပသူအတွက်ကတော့ လူတွေစိတ်ထဲမှာအမြဲနေရာရှိနေပါလိမ့်မယ် ။
ထုံးစံလိုဖြစ်နေပေမယ့် မွေးထားလို့မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးကြီးဖြစ်တဲ့ သူများကို body shaming လုပ်တဲ့အကျင့်ကို ကြိုးစားဖျောက်ရအောင်နော် ။ သူများကကိုယ့်ကိုလုပ်ခဲ့ရင်လည်း ရှက်ရွံ့မနေပဲ body shaming လုပ်ခြင်းက ရှက်ဖို့ကောင်းပြီး ရိုင်းတဲ့အပြုအမူဖြစ်ကြောင်း ပညာပေးလိုက်ပါ။ ဟဲဟဲ ။ ကျွန်မအမြင်သက်သက်ကို စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းချရေးတာမို့ အမြင်မတူပါက မဖတ်ပဲကျော်သွားနိုင်ပါတယ်ရှင့် ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင် ။
လှောင်ပြောင်ကဲ့ရဲ့တတ်သူက ရှက်ရမှာလား ?? မသဲကွဲသရွေ့တော့……
အဲ့ဒီ body shaming, homophobia, gender discrimination, racial discrimination တွေက အခု အတော် ကို စန်းစန်းတင့် လာကြတယ်။
body shaming နဲ့ စေတနာ နဲ့ ပြောတာနဲ့ကလဲ စည်းပါးပါးလေး ပဲ ခြားတာ ဆိုတော့ကာ။
ကိုယ်တွေ့ ဟိုတစ်ကောင် ကို အရင်က လူကြီး ကြီးနေလို့ (အမောမလုံ ကိုယ်ခံအား နည်း နဲ့) ပွစိ ပွစိ တွေပြော
ဂျင်မ် တွေ အတင်းလိုက်အပ်
ပြီး အခုကျတော့ သူ့ဟာသူ ကျန်းမာရေး ကောင်းလာတာ သိတော့ ကိုယ့်တောင် ပြန်ဆွဲနေသေးတယ် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ကို (အစားတွေ ကျွေးနေတာလဲ ကိုယ်ပဲ အဲတော့ ၂ကောင်သား ဝိတ်ကတော့ ကျဖို့ မမြင်)
အနောက်တိုင်း က လူချင်းတွေ့ရင် ဟယ် ဝလာတယ်နော် ပိန်သွားလိုက်တာ ဆိုတာမျိုး မပြောဖို့ ကျတော့လဲ အဆင်မပြေ။
သူများတော့ မသိဘူး ကိုယ်တော့ ဒီတိုင်းပြောလိုက်တာပဲ နာလေရော့လဟယ် စိတ်မျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အိမ်ပြန်သွားပြီး ပြန်လာတဲ့ လူ ဖောင်းကား ပြီး ပြန်လာရင် ပြော
ပင်ပန်းပြီး ပိန်သွားတဲ့ လူတွေ့ရင် ပြော
တကယ်ကြီးကို ဝ နေလို့ သတိပေးတဲ့ အနေနဲ့ ပြောတာကော မရဘူးလားလို့
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆို နေ့တိုင်း မြင်နေကျမို့ ဝ လာရင်တောင် ဝလာမှန်း သတိမထားမိတာ ရှိသကိုး။
ရုံးက မလေး တရုတ်မ ဆိုလဲ အဲ့လိုပဲ သူ့ အယူအဆ က ပိုတောင် ကြွေစရာ ကောင်းသေး
ဗိုက်ကလေး စူ နေတာ စားနိုင်သောက်နိုင် စိတ်ချမ်းသာ လို့ ဖြစ်တာ ဆိုပြီး သူက ဝမ်းပန်းတသာ သူများတွေကို ဝ တယ်နော် ဆိုပြီး လိုက်ပြောနေတာ။ း)
ခု နောက်ပိုင်း ဟို LGBT တွေ black/white တွေ ခေတ်စားချက်ကတော့
အော်စကာ မှာလဲ လူမည်း စာရင်းဝင်တာ နည်းလို့ ဆိုပြီး ပြဿနာ တွေ တက်
ရုပ်ရှင်တွေ ဆိုလဲ ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် ယောက်ျားချင်း ကြိုက် မိန်းမချင်း ကြိုက်တာတွေ ထည့်ရိုက်ပြရနဲ့
မောင်ကောင်းထိုက် ထဲက ဟာသ ပဲ ပြန် ပြန် သတိရတယ်။
ကုမ်ပဏီ က နေ လူတစ်ယောက် လျှော့ရမယ် ဆိုတော့
အဖိုးကြီးက ငါ့ကို ဖြုတ်ရင် သက်ကြီးရွယ်အို မို့ ဖြုတ်တယ် ဆိုပြီး ပြသနာ ရှာမတဲ့
လူမည်း က အသားအရောင် ခွဲခြားတယ် ဆိုပြီး
အမျိုးသမီး က လိင်ခွဲခြား လို့ ဆိုပြီး တရားစွဲမယ်ပေါ့
အဲ့တော့ နောက်ဆုံး ကျန်တာက
ယောက်ျား လေး သန်သန်မာမာကြီး
“ကျနော်လဲ ခြောက်များ နေသလား မသိ” တဲ့။
ကြာရင် သူတို့ကို ပြန်ကြောက်ရတော့မယ်။
အဲဒီ ပြန် ကြောက်တဲ့ အဆင့်အထိမပြောပါနဲ့ကွယ်။
ကိုယ်တို့ နိုင်ငံမှာနဲ့ ကိုယ်တို့ အမျိုးကောင်းသားတွေမှာ လူလူချင်းပိုးစိုးပက်စက်မပြောနိုင်တဲ့ ညှာတာတတ်တဲ့ စိတ်ထားလေးတွေ အရင် ဝင်ပါစေအူးလေ။
ခုဟာက စနောက်တာ အမည်ခံပြီး ကိုယ့် အငုံ့စိတ်နဲ့ကို သူများကို မှိုချိုးမျှစ်ချိုး ပြောချင်တာ ပိုများနေလို့ပါ။
စိတ်ထားပြည့်တဲ့ သူတွေက သူများကို Shaming လုပ်ခဲတယ်! သတိထားကြည့်!
အာ့လို စိတ်ဓာတ်တွေ ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဘာလဲ ခုထိ စဉ်းစားမြဘူ!
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ထဲ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့က ဖြတ်မလျှောက်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းက ဘာလဲဆိုတာကနေ ဖြန့်ကျက်စဉ်းစားကြည့်ရင်သိသာတယ်!
ခန်ဒါကိုယ် အချိုးအစားကို ပြော
ချို့ယွင်းချက်ကို ကဲ့ရဲ့ နိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးတွေ လေ!! ???
ကိုယ်တွေငယ်ငယ်ကတော့ (အလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝ) သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း body shaming လုပ်ပြီး
ဆင်ခြင်ဖို့ စိတ်လေး ပေါ်လာတာကို အနည်းဆုံး တော်သေးမှတ်ရ မိုက်မိုက်ရေ။
ရှိသေးတယ် ရှိသေးတယ် single တွေကို လေ အပျိုကြီး လူပျိုကြီး ခေါ်ခေါ်နေတဲ့သူတွေ
ဘယ်တော့စားရမှာလဲ မယူသေးဘူးလား ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် လူရာမဝင်ဘူး ဘာဘူး ညာဘူး လာလာပြောတတ်တဲ့သူတွေ
တလဘယ်လောက်ဝင်သလဲက ပါသေး ဘာလုပ်ချင်တာလဲ မသိဘူးနော် သူများကိစ္စတွေ စပ်စပ်စုစုနဲ့
စင်ဂယ်ဆို ဘာလို့မရတာလဲ ဆွာ စုံစမ်း စစ်ဆေး စပ်စု အတင်းတုတ်မယ်။
ယူရင် ယူတဲ့သူက ဘာဆွာ စုံစမ်း စစ်ဆေး စပ်စု အတင်းတုတ်မယ်။
ကလေးမရသေးရင် ဘာလို့လဲ ဆွာ စုံစမ်း စစ်ဆေး စပ်စု အတင်းတုတ်မယ်။
တစ်ယောက်ရပြီးရင် နောက်တစ်ယောက်မြူသေးဖုလား စုံစမ်း စစ်ဆေး စပ်စု အတင်းတုတ်မယ်။
အတွေးထဲ လင်ရှိလား လင်မရှိလား လင်ယူမလား မယူဘူးလားလောက် တွေးနေတဲ့ အချိန်မစီးတွေ။
မမဂျီး ရေးထားတဲ့ စာတွေနေရာကို ဖတ်လာတာ…. ဟိုလေ… နည်းနည်း ဒေါနဲ့မောနဲ့ ရေးထားသလိုလိုပဲလို့… ခံစားရတယ်။
ခုရက်ထဲ မမဂျီး ဒီကိစ္စကို နည်းနည်း ဒေါပွနေပုံရလို့… အရင်လို စရ နောက်ရမှာတောင် ခပ်လန့်လန့် ဖြစ်သွားတယ်။
ဒါပေမဲ့… ချို့ဖဲ့ ကဲ့ရဲ့ချင်လို့ စရာ အကြောင်း ဘာမှ မရှိတော့…
ကျနော် အရင်က စတာနောက်တာတွေက ကိုယ့်အစ်မကြီးကို ချစ်လို့ စတာပဲလို့ ကိုယ့်ဘာသာ တွေးနေတာပါပဲ။
နောက်နောက်ပြောင်ပြောင် နေတတ်တဲ့ ကိုယ့်မောင်လေးကို နင့်နင့်သီးသီး စိတ်မဆိုးလောက်ဘူးလို့လည်း ယုံထားတယ်။
မမဂျီး ပြောတာ ဟုတ်တယ်… ။
မမဂျီး သဘောကောင်းတာ၊ အစအနောက် ခံတာ၊ ပျော်ပျော်နေတတ်တာ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်းနဲ့
ဟန်ဆောင်မှုကင်းကင်း ဆက်ဆံပြောဆိုတတ်တာတွေဟာ… ချိုးဖဲ့စော်ကားခံရဖို့ မဟုတ်ဘူး။
အဲ့လို တမင် လာ ချိုးဖဲ့ရင်လည်း… အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိတော့… ကျောင်းမှန်း ကန်မှန်းသိအောင်…
နဂါးမှန်း သိအောင် အမောက်ကလေး ထောင်ပြရမှာပဲ။
မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ ဒီလိုပဲ သည်းခံသင့်သလောက် ခံပြီး.. တုန့်ပြန်သင့်သလောက်တော့ တုန့်ပြန်ရမှာပါပဲ။
ကျနော်လည်း ဒီပိုစ့်ဖတ်ပြီးမှ… ကိုယ့် မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း မိန်းကလေးတွေတချို့ကို ပြောမနာ ဆိုမနာ ဆိုပြီး
နောက်ဟယ် ပြောင်ဟယ် လုပ်မိတာတွေ ရှိတော့… ဆင်ခြင်ဦးမှ လို့…. အသိလေး ဝင်လာပါကြောင်း…
တစ်ပုဒ်လုံးမှာ ဒေါ ပါဒေ။
နာ စိတ်ဆိုးပြီ ဆိုရင်လည်း အလကားနေရင်း စိတ်မဆိုး စိတ်မတိုပါဘူးး
ပြောတဲ့ စကားရဲ့ အတိမ်အနက် နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို အာရုံရမှ သာ ဒေါကန်ဒါရယ်။
ကိုယ့် အချင်းချင်း ချစ်စနိုး စ တာနဲ့ ပြောရကောင်းစေလို့ ပြောချင်လို့ကို ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ ပြောတာရယ် အကွာဂျီးပါလေ။
နာ့ မ အ ဖူးမြန်းမှတ်နေလားး
ဟုတ် ..နောက်နောင် ဆင်ခြင်ပါ့မယ်..
ပျော်စေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ တခါတလေ မှားတာမျိုးရှိခဲ့ရင်လည်း ခွင့်လွတ်စေချင်ပါတယ်..
တခါတလေတော့ အပြင်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ စိတ် အနေအထားကို စာဖတ်ပြီးခန့်မှန်းလို့မရတော့ လွန်လွန်ကျူးကျူး ပြောမိတာမျိုး ရှိခဲ့ရင် လည်း တောင်းပန်ပါတယ်..
အားလုံးကို မောင်နှမ မိသားစုတွေလို သဘောထားပြီး စခဲ့နောက်ခဲ့ ပြောခဲ့တာတွေအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်..
လူမှုဆက်ဆံရေးရဲ့ အဓိက အချက်ထဲမှာ အပြန်အလှန်လေးစားခြင်း ပါတာမို့
မိန်းမတစ်ယောက်မို့ မလေးမစားမန့်တယ်လို့ ခံစားမိရင် ကျနော် မကြိုက်ဘူးဗျ။
ကျန်တာ ကျနော် ဘယ်လောက် သည်းခံလည်း စနောက်တာကို ခံနိုင်လည်း သိကြမှာပါ။
လူတယောက်ကို.. လူတယောက်က အချိန်ပေးပြီး စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုကတည်းက.. တကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်လို့.. စိတ်ဝင်တစားပြောချင်..။
( မတူတဲ့အတွေး.. )
ကိုယ့် သတ်မလို့ နောက်ကနေ stalk လိုက်လုပ်နေသလိုကြီးရယ်
နိ ပြောလပ်မှ ကျောချမ်းလပ်ထာအေ။
မပြောမိအောင် မပြောဖြစ်အောင် ထိန်းတယ်။ body shaming လုပ်တာလည်း မုန်းတယ်။
ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားလို့လားမသိ။
သူများ သွင်ပြင်ကို အရေးလုပ်ပြီးကို မပြောချင်။
ရွာထဲအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မဝင်ဖြစ်တာ ကြာပြီ။
ခုချိန်ထိ တစ်သက်လုံး ပိန်ကပ်နေတာပဲတို ့ပိန်ညောင်နေတာပဲနော်ဆိုတာတွေ
အပြောခံပြီး ကြီးပြင်းခဲ့ရသူမို ့ဒီပို့စ်ကို မြင်ပြီး ကြိုက်တယ်လို့ ထောက်ခံပါတယ်လို့
အားရဝမ်းသာ… လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ထောက်ခံရမယ့် ပိုစ့်ကြီးပါ…။ ကိုယ်တိုင်လဲ သူများကို Body shaming မလုပ်သလို သူများက ခင်မင်လို့မဟုတ်ဘဲ အားနည်းချက်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ပါးစပ်အရသာခံ လာလာနင်းတာမျိုးတော့ မကြိုက်…။
ဒီထဲမှာ ပါသလိုပဲ လူသားချင်း နှိမ်ချပြောတာကို ရီစရာလို သဘောထားကြတာလဲ ပါမယ်…
စာလုံးဖောင့်တွေက ဘိုလိုဒေ လာလာပေါ်နေတယ် မသိ…။ မှန်း ရိုက်ရတာရယ်..
သူများကို စိတ်ချမ်းသာစေလိုတဲ့ စိတ်လေးပဲ လိုတာပါ။
သူများကို စိတ်ညစ်စေချင် စိတ်ဆင်းရဲစေချင်တဲ့ စိတ်ရှိသူများတယ်ရယ်။
၁၀ဝ မှာ ၉၉ ယောက်ပဲ.. ။ စိတ်မကောင်းစရာ..
တွေ့တိုင်း Body shaming က အရင်စပြောတာတွေလဲ အလုပ်ခွင်မှာတင် မနည်းမနောရယ်…
အစောပိုင်းတော့ ဒောသထွက်သလိုရှိပေမယ့်.. နောက်ပိုင်းတော့ ရီပဲ ရီချင်မိတော့တယ်..
ကိုယ့်ထက်တောင် ကိုယ့်ကိုပိုဂရုစိုက်ပေးကြတော့ အားတောင်နာလာသလိုပဲ..ဟီးးးး..
ဒါပေမယ့်လဲ ပိုလီယိုလို၊ မျက်စိစွေနေတာတွေလိုမျိုး ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့ အကျင့်စာရိတ္တနဲ့လဲ မဆိုင်တဲ့ ဒီရုပ်ရည်ကို တိုက်ခိုက်သံတွေကြားရင်တော့ ပြောတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီး ဘေးက အကုသိုလ်များရတယ်…
ကွကိုယ်တော့ သူများဖြည့်တွေးပေးတတ်တဲ့ ဉာည် အမြဲရှိတယ်။ ဒါပေသိ ကိုယ့်လာ shaming လုပ်ရင်တော့ ပေါ်တင်ဆဲပစ်တာ။ ကိုယ့်လုပ်စာကိုယ်စားပြီး စိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့သူတွေကို အကြာကြီး သီးခံဖို့ စိတ်ကူးမရှိဘူး
ကိုယ့်လုပ်စာကိုယ်စားပြီး ကိုယ် ဝ လာကတည်းက အပြောမခံတော့တာပဲလို့။
ပြောရရင် ကိုယ်တိုင်လည်း သိပ် မပြောဖြစ်ဘူးရယ်၊ (ပြောရလောက်အောင်လည်း အာရုံစိုက် မကြည့်ဖြစ်၊ ကြည့်ပြန်တော့လည်း ကွာခြားချက်ကို သိပ် ဂရုစိုက်မိတာမဟုတ်လို့)
ကိုယ့်ကို လာပြောရင်လည်း ခေါင်းထဲ သိပ်မထားဖြစ်ဘူး
စတာ နောက်တာလောက်တော့ သူများပြောတဲ့နောက် လိုက် ပြောတတ်ပေမယ့် များလာရင်တော့လည်း ဒီတိုင်းပဲ မေ့သွားပြန်ရော
ပိန်တယ် ဝတယ် ပြောတဲ့ထဲလဲ မပါ၊ ပြောခံရတဲ့ထဲလဲ မပါတော့
ခုထက် ပို သတိထားဖို့ပဲ တွေးလိုက်ပါတယ်လေ
ဒီ မန့်က နိ ဟာနိ မပိန်မဝမို့ ပုံမှန်မို့ အပြောမခံရကြောင်း လာကြွားဒါလားးး
နာ့ ကို ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဂျင်ဒါမလားးး
ဗျဲ ဟဲ ဟဲ။
ဒါ ပိန်တဲ့ လူတွေကိုရော ဝတဲ့ လူတွေကိုရော ဘော်ဒီ ရှိမ်းမင်း လုပ်တာ…
တဂျား ကို ဆန့်ကျင်ဂျဘာာာာ း)
ငယ်တဲ့အမှုကို နုရင်ဘတ် စစ်ခုံရုံး သွားတင်နေကြပြန်ပါပြီ
ငတို့လဲ အွန်လိုင်း ဆယ်လီ ပွဲတွေ ကြည့်တာ များသွားတော့ကာ စကားလုံး အထအန ကောက်တာ စွန်းးးတော် လာပြီလေ.. း)
ကြီးသည့်အမှုကို ခုံရုံးရောက်အောင် လုပ်တတ်နေဘီယေ။
ဒီစာသားလေး ကြိုက်တယ် မမချွိ..။
“အပေါင်းအသင်းပိုင်းမှာ ချစ်ခင်လို့ စတာရှိတယ်။
ပျော်ပျော်နေတာ၊ ဟာသပြောတာ၊ အရောဝင်တာ၊ ရင့်ရင့်သီးသီး ပြန်မပြောတာဟာ ကိုယ့်ကို ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ ပြောခွင့်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိစေချင်တယ်။”
As for me ,သူများမျတ်ချေးပဲမြင်ပြီး ကိုယ့်မျတ်ချေးကိုယ်မမြင်တတ်တဲ့ လူတွေအတွက် Neglect လုပ်ပြီး မေတ္တာသာပို့ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
ကြောင် က ဘူး သာ ဘူး ဒါ။